Sawireyaasha fayraska – Windows – Vessoft
HitmanPro – waa qalab wax ku ool ah oo lagu garto lagana saaro waxyaabaha xunxun iyadoo la adeegsanayo falanqaynta dabeecadda iyo teknolojiyada daruuriga ah.
Afduub – Tani waa barnaamij lagu baabi’iyo fayrasyada, trojans, iyo spyware. Softiweerka softiweerka ee hanjabaadaha soo galay nidaamka ayaa ka dhashay isticmaalka shabakada.
Crystal Security – waa aalad weyn oo taageerta tikniyoolajiyada daruuriga ah ee heerka dheeraadka ah ee ilaalinta kombiyuutarka marka lagu daro xalka antivirus-ka oo buuxa.
Auslogics Anti-Malware – aalad ayaa la jaan qaadi karta softiweerka si loo ilaaliyo kombuyutarkaaga waxayna kuu suurtogelinaysaa inaad ogaato oo aad ka saarto barnaamijyada xunxun ama faylasha kale ee laga shakiyo.
Tool in la ogaado oo meesha laga saaro fayrusyada ama hanjabaad kala duwan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo saarto noocyo kala duwan oo ah fayrasyo ​​iyo hagaajin dhibaatooyin diiwaanka nidaamka cudurka.